#1 Invisalign Cape Town | Sula ama-aligner | I-Platinum Certified
WOW Amazinyo Amhlophe
I-Invisalign Clear Braces
Izixazululo Zamazinyo V
I-Cosmetic Dentistry Sea Point
Izimila Zamazinyo eKapa
Izinkinga Zamazinyo V
Isimo Esiphuthumayo Sezinyo
Ukuhogela nokulala ubuthongo
Ubuchwepheshe Bamazinyo V
Ukufakwa kwamazinyo nokumbondelana
Umklamo we-Digital Smile
I-Orthophos 3D X-Ray
Xhumana nathi V
Yingani Ukhetha Thina?
Udokotela wamazinyo eduze kwami ​​uyabuyekeza
I-Optismile inc. Imigomo | izimo | inqubomgomo yokubuyiselwa kwemali
Invisalign Cape Town | I-OptiSmile
Qondisa Amazinyo Akho Ngesitayela
inombolo yokuqala, Cape Town Platinum Invisalign provider Braces eduze kwami, hhayi ithuba | i-braces ecacile yonke indlela!
Joyina I-Great Smile Club!
Ukuqondisa Kwamazinyo Amazinyo
Nge-Invisible Clear Aligners.
Ngaphezulu kwezigidi eziyi-12 zokumamatheka okuhle okuqondiswe emhlabeni wonke
Skena le khodi ukuze ubone ukumamatheka kwakho okusha
Ingakanani i-Invisalign braces? Ingabe ifanele imali, noma kungcono ukuhamba nezinsimbi zendabuko? Intengo ejwayelekile ye-Invisalign braces ivamise ukuba phezulu kancane kunezikali ezijwayelekile. Isilinganiso sezindleko siphakathi kuka-R48,000 no-R110,000; udokotela wakho wamazinyo noma udokotela wamazinyo angalinganisa kangcono intengo.
Chofoza lapha ukuze ubone ukumamatheka kwakho okusha kumasekhondi angu-60
Iyini ngempela i-Invisalign?
Ukumamatheka okuhle kwezigidi eziyi-12 kubone impumelelo nge-Invisalign. Indlela ethandwa kakhulu emhlabeni yokuqondisa amazinyo, lezi ziqondiso ezicacile zihlakaniphile, zimnene kodwa zinamandla amangalisayo emazinyweni anyakazayo ngokuzethemba endaweni yawo entsha.
Isebenza kanjani i-Invisalign?
Funda mayelana nendlela i-OptiSmile esebenzisa ngayo lezi ziqondisi zekusasa ukuze ziqondise amazinyo. Amaleveli athuthukile odokotela bamazinyo akhelwe ekwakhiweni kwalaba baqondisisi kanye nendlela iziguli zethu ezihlukile ezibona ngayo imiphumela esikhathini esingangezinyanga ezine. Udokotela wamazinyo osezingeni eliphezulu uyasebenza!
I-Invisalign Ngaphambi Nangemuva.
Ukumamatheka kwamaphupho akho kuvame ukuhlala kunjalo, kuyiphupho nje. I-OptiSmile ihlose ukuguqula amaphupho abe ngokoqobo futhi inikeze wonke umuntu ithuba lokumamatheka ngokuzethemba nangomdlandla. Akukho okuqhathaniswa nemiphumela emangalisayo esiyibona nsuku zonke.
Kuthiwani Ngezindleko ze-Invisalign?
Ukumamatheka okuhle kuwutshalomali lwempilo yonke. Ukuzethemba kukhanya kuzo zonke izici zempilo yakho. Ikhono lakho lokukhuluma ngokuzethemba, ukugcina ukubheka emehlweni, nokungena ngesibindi enguqulweni entsha yakho liyatholakala kuwe.
Ama-aligners athuthuke kakhulu e-orthodontic futhi asebenza kakhulu ase-Sea Point, eKapa, ​​eNingizimu Afrika.
I-Invisalign iwukwelashwa kwe-orthodontic esebenzisa okokuqondanisa okucacile, kwepulasitiki ukuze kuqondiswe amazinyo ngokunyuka kwamaviki amabili. Ngemuva kokuthi amaviki amabili esephelile, uzoshintsha isethi yakho yokuqondanisa kokuqondanisa okulandelayo okusethwe ochungechungeni lwakho lokuqondisa. Ama-invisalign aligners aklanyelwe ukumamatheka kwakho okuyingqayizivele nohlelo lokwelapha.
Angakwazi ukuhambisa amazinyo ngamandla athambile ukuze avale izikhala, anciphise ukuminyana, futhi alungise izinkinga zokuqondanisa ezincane zokulunywa, njengokubiyela ngokweqile nama-underbites.
I-OptiSmile iwumkhuba wokuqala wamazinyo e-Afrika ukusebenzisa isithwebuli se-Itero. Ingabe ubulokhu ufuna amazinyo aqondile kodwa wesaba izinhlungu, ukuphazamiseka kokudla, nokubukeka “kwe-tin grin”? Ingabe uyasebenza futhi ufuna ukuvumelanisa amazinyo akho? I-Invisalign ngeke iphazamise imisebenzi yakho yansuku zonke.
Ngokungafani nezisekelo ezingajwayelekile, i-Invisalign ivumela ukulungiswa okunembile ezindaweni ezithile emlonyeni wakho esikhundleni sokubeka ingcindezi kuwo wonke amazinyo akho "afakwe intambo".
Emhlabeni wonke abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-11 bathole inzuzo ye-Invisalign orthodontics ecacile ngaphandle kokuba nezinsimbi. Kuyindlela enhle, engahlaseleki engathola imiphumela ngokushesha kunezinsimbi ezivamile, ilungele abantu abadala kanye nentsha engafuni amathrekhi esitimela endabuko. Ngaphezu kwalokho, ungajoyina iklabhu yokumamatheka enhle kakhulu.
Bhuka Ukubonisana Kwakho Kwevidiyo Kwamahhala
"Angikwazanga ukujabula kakhulu ngomphumela wokwelashwa kwe-Invisalign ovela kudokotela wamazinyo uDkt Harris Smeyatsky kanye nokuqedwa kwezimonyo kukaDkt Clifford Yudelman. Kweqe engangikulindele ngesigamu sesikhathi ebesilindelwe.
amazinyo amakhulu utshalomali olungcono kakhulu umuntu angalwenza. Izame!"
Isebenza Kanjani Inqubo Ye-Invisalign?
U-Harris Smeyatsky ungumholi weqembu le-OptiSmile's Invisalign futhi uzosingatha udaba lwakho mathupha. Ngesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengama-20 e-UK naseNingizimu Afrika, bambalwa kakhulu ochwepheshe abanaleli zinga lobuchwepheshe nolwazi.
UDkt Harris uzoxoxa ngokukukhathazayo kwamazinyo ngokuningiliziwe futhi asebenzise i-Invisalign Doctor Photography App ukuthatha izithombe zamazinyo akho futhi alayishe i-panoramic x-ray yakho ku-Invisalign. I-Invisalign iqondise ngempumelelo ukumamatheka okungaphezu kwezigidi ezingu-11 futhi iyisixazululo esikhula ngokushesha kakhulu sokuqondanisa amazinyo emhlabeni jikelele, kulula ukuyihlanza, ukuyisusa kalula futhi ayibonakali. Sithatha izithombe ezinemininingwane yamazinyo akho futhi sikulume futhi sikulungiselela isethi yakho yokuqala yokuqondanisa.
Ngabe i-Invisalign ingaziphatha izingane futhi?
I-Invisalign First iklanyelwe ukusiza ukwakha ukumomotheka okuncane okuyinkimbinkimbi, ukumamatheka okuphakathi kanye nokumamatheka kwentsha kanye nokwelapha izinkinga zokuqondisa amazinyo ezilula kuya ezinzima ekukhuleni kwezingane ezineminyaka engu-6 kuya kweyi-10, okuhlanganisa ukuminyana, ukushiya isikhala namakhothamo amazinyo amancane. Ngaphezu kwalokho, inhlanzeko yomlomo iyasuswa ukuze kube lula ukuphatha inhlanzeko, okwenza kube lula ngezingane ezikhulayo ukuba zixube futhi zishaye ifloss!
Imisebenzi yezingane yangemva kwesikole ngeke ithinteke, futhi ingahlala ikhuthele kwezemidlalo efana ne-ballet, ibhola likanobhutshuzwayo, ibhola lombhoxo kanye nanoma yimuphi nje omunye umdlalo osebenzayo. Ngaphezu kwalokho, bangama-aligners asebenzayo okusho ukuthi baqondisa amazinyo ngenkuthalo. Amachashazi okuzithandela ezinkomba zokuthobela akusiza ukuthi uqaphe ukuqhubeka kwamazinyo abo ngesikhathi sokwelashwa futhi angakusiza ukuwagcina ekhuthazekile futhi ubeke ingane yakho kuqala!
Kwenzekani Ngemva Kokubonisana Kwami Kokuqala?
Uku-oda nokufika kwama-aligners akho!
Isinyathelo esilandelayo sijabulisa kakhulu! Okokugcina, sizoku-oda okuqondanisa kwakho.
U-Harris uzochofoza ukugunyaza ku-IDS (Invisalign Dentist Site), futhi ohlelweni, singabona ukuthi ukukhiqiza kuzoqedwa nini nokuthi kuthunyelwa nini nge-DHL.
Siyabona ukuthi izofika nini eNingizimu Afrika, futhi ngezinye izikhathi kuthatha izinsuku ezimbalwa ezengeziwe ukusula amasiko noma ukwehla kuze kufike kithi kusukela eGoli. Kusukela ngesikhathi sokugunyazwa ukuze uthole ama-aligners akho okwamanje cishe amasonto amathathu.
Ukwelashwa kwe-Invisalign kushukumisa amazinyo akho ngokusebenzisa amandla athambile, angashintshi, kodwa abanye abantu bazizwa bengakhululekile okwesikhashana ezinsukwini ezimbalwa zokuqala zokugqoka isethi entsha yokulinganisa.
Imvamisa, abantu bakuchaza njengokuzwa “ingcindezi”, futhi kujwayelekile — kuwuphawu ukuthi oqondanisa bakho abacacile be-Invisalign bayasebenza futhi baguqula ukumamatheka kwakho.
Yivalelise kubakaki bensimbi abanzima futhi sawubona ukumomotheka okuthembeke kunakho konke owake waba nakho.
Izindleko eziqondile zokwelashwa kwakho okungabonakali zizonqunywa:
Ubunkimbinkimbi becala lakho, Usuhlale isikhathi eside kangakanani ukwelashwa, Umhlinzeki we-Invisalign omkhethayo ukuze uthole ukwelashwa nokuthi yiziphi izinhlelo zokukhokha abakunikezayo.
Ingakanani i-Invisalign braces? Ingabe kufanelekile, noma kungcono ukukhetha izinsimbi zendabuko? Intengo ejwayelekile ye-Invisalign braces ivamise ukuba phezulu kancane kunezikali ezijwayelekile. Umkhiqizi, udokotela wakho wamazinyo noma udokotela wamazinyo angakunikeza umbono ongcono wentengo. Izici ezitholakalayo yizinga lokuqondanisa kwamazinyo akho kanye nenani lama-aligner ozolidinga ngesikhathi sokwelashwa. Izindleko ezijwayelekile zezisekelo ezivamile ziyehluka kakhulu kodwa ngokuvamile zisuka ku-R35,000 ziye ku-R85,000 kuye ngezidingo zakho ngabanye futhi kufanele kuxoxwe ngazo nodokotela wakho wamazinyo. I-Invisalign isukela ku-R35 000 kuye ku-R110 000.
Ngemva kokuthola imvume yezezimali ngohlelo lwezezimali olugunyaziwe lwaphinde lwasayinwa, ukukhokha ngokugcwele ngesaphulelo noma ngediphozithi kanye nama-oda anyanga zonke okudonswa kwemali, siqala ukwenza uhlelo lwakho lokwelapha lwe-Invisalign.
"Nginganikeza izinkanyezi ezingu-10 uma ngikwazi - ulwazi lwami lwe-Invisalign noDkt. Harris lube yisimangaliso esimangalisayo."
Amandla e-Itero Scanner
Iskena sokuqala se-Itero Element e-Afrika
I-OptiSmile iyaziqhenya ngokuba ngumkhuba wokuqala wamazinyo e-Afrika wokuba nesithwebuli sezinguquko se-iTero Element.
U-Harris uzoskena umlomo wakho ngesithwebuli sethu se-iTero esinamandla ngesikhathi sokubonisana kwakho kokuqala. Emaminithini ambalwa, uzoba nesithwebuli se-3D se-hi-resolution samazinyo akho, uwabuke kahle.
Lesi sithwebuli esiyingqayizivele sikhiqiza ukuskena kwamazinyo akho ukuze kube nokunemba kwe-micron, futhi lokhu kulayishwa ngengosi kadokotela eyingqayizivele ngqo ku-Invisalign e-USA. Uma u-Harris esejabule ngohlelo olungase lube khona kanye nezinga lokuqondisa elidingekayo. U-Harris uzolayisha iskena sakho ngqo ku-IDS Invisalign Doctor Site.
Izinto ziqala ukwenzeka ngokushesha lapho ochwepheshe be-Invisalign abaqeqeshwe kakhulu nabaqeqeshiwe e-USA beqala ukuqondisa amazinyo akho cishe besebenzisa isofthiwe ye-Invisalign enelungelo lobunikazi.
Phakathi nokuvakasha kwakho kokuqala, usuzokwazi ukubona ukunikezwa okubonakalayo kokumamatheka kwakho okusha ukuze ubone imiphumela yakho yesikhathi esizayo phakathi nezinyanga ezizayo.
Iziguli zethu zithola ikusasa lodokotela bamazinyo abasezingeni eliphezulu ngendlela engakaze ibonwe njengoba lesi sithwebuli samandla sibonisa amandla okuqondanisa e-Invisalign kanye nokudalula yonke indawo eyinkinga emlonyeni wakho njengoba sithuthukisa uhlelo lwakho lomuntu siqu.
I-Invisalign Sula Abakaki Ngaphambi Nangemuva
Ibiza malini I-Invisalign Clear Braces?
Ingakanani i-Invisalign braces izindleko?
Ingabe kunjalo kufanelekile It, or ingabe kangcono ukuhamba isendabuko umzila wamathrekhi kaloliwe?
Ukutshala imali ekumamathekeni kwakho nempilo yomlomo nge-Invisalign® nezinsimbi kuzoqinisa ukuzethemba kwakho kuyilapho kuthuthukisa ukusebenza kwamazinyo akho ngesikhathi esifanayo. Ngaphezu kwalokho, kuwutshalomali lwempilo yonke.
The Intengo ejwayelekile ngoba Izikaki ze-Invisalign ngokuvamile ziphakeme kune izinsimbi ezijwayelekile zensimbi noma ze-ceramic ezinezintambo. Kuya nge umenzi, izindleko ezimaphakathi ziphakathi R38,000 futhi R100,000.
Your udokotela wamazinyo noma udokotela wamazinyo angakunikeza isilinganiso esingcono salokhu intengo. Izici ezifika emdlalweni ziyi inani wokuqondanisa amazinyo akho kudingeka futhi inombolo ye- ama-aligner edingekayo ngesikhathi sokwelashwa.
The izindleko ezijwayelekile ze ikesi elijwayelekile le-orthodontic elinezinsimbi zensimbi noma ze-ceramic ziyahlukahluka kakhulu kodwa ngokuvamile phakathi kuka-R30,000 no-R95,000.
Nalapha futhi, izindleko (izinkokhelo, intengo) zizohluka kuye kwelinye nelinye, kuye ngezidingo zakho ezithile, futhi kufanele kuxoxwe ngazo wethu ofaneleka kakhulu odokotela bamazinyo.
Ukusebenzisa ulwazi lwethu ukusiza ukufeza imiphumela engalindeleka kangcono nemiphumela emihle.
I-Ultimate Guide to Invisalign
Gcwalisa imininingwane yakho ukuze uyilande
Ngiyavuma ukwamukela ulwazi lwamanani, ulwazi lokuphrakthiza nge-imeyili noma nge-WhatsApp
UDkt Harris Smeyatsky
U-OptiSmile unelungelo lokuba nochwepheshe oqeqeshwe kakhulu, oyi-Invisalign Certified Platinum Elite Level UHarris Smeyatsky.
U-Harris uyena kuphela uchwepheshe we-Invisalign ezingeni le-platinum eKapa, ​​kanye nomunye uchwepheshe oyedwa eGoli.
Esebenza e-UK iminyaka eminingi, u-Harris wacija amakhono akhe njengodokotela wamazinyo we-Invisalign egxile ohlelweni lwe-Itero. Isithwebuli esithuthuke kakhulu se-Intraoral emhlabeni, akukho lutho olusondela emandleni nokunemba. Ngokuhambisana namakhono omtholampilo nokunaka imininingwane, i-Genuine Invisalign kanye no-Harris Smeyatsky benze inhlanganisela engahlulwa eqondisa ukumamatheka kwamakhulu eziguli ngempumelelo.
I-OptiSmile isebenza nodokotela bamazinyo abangcono kakhulu kuphela ukuqinisekisa ukuthi uyamamatheka ngokuzethemba futhi ufinyelela yonke imigomo yakho yamazinyo. Asilokothi siyekethise ikhwalithi, futhi ukumamatheka okugunyaziwe kwe-OptiSmile kuwukumamatheka impilo yonke. Bhuka ukubonisana kwakho kwamahhala kwevidiyo ye-Invisalign namuhla futhi uqale uhambo lwakho olubheke emamathekeni oqiniseka kakhulu ngangokunokwenzeka.
Udinga eminye imininingwane?
Sibuze Noma Yini
Yini i-Invisalign Clear Aligners?
Zinguchungechunge lokuqondanisa okucacile, okungabonakali, nokususwayo okushintsha njalo emavikini amabili kusethi entsha. I-aligner ngayinye yenzelwa amazinyo akho uqobo. Njengoba ushintsha i-aligner ngayinye, amazinyo akho azohamba - kancane kancane, isonto nesonto - aze aqonde endaweni yokugcina ebekwe yi-OptiSmile. Imvamisa iziguli ziba nezivumelwano eziphakathi kuka-18 kuya ku-30 ​​phakathi nokwelashwa kwazo.
Isici esingeziwe ukuthi sinohlelo lokwelashwa olubonakalayo olukhombisa uchungechunge lokunyakaza amazinyo akho azodlula kulo lonke lolu hlelo lokwelashwa. Lokhu kukukhombisa phambili ukuthi amazinyo akho kulindeleke ukuthi abukeke kanjani ekugcineni kokwelashwa. Kusuka kule miphumela, ukuqondanisa kwakho okwenziwe ngokwezifiso, okucacile kukhiqizwa ikakhulukazi wena.
I-Invisalign iyindlela engcono kakhulu yokuguqula ukumamatheka kwakho ngaphandle kokuphazanyiswa empilweni yakho yansuku zonke futhi ingasetshenziswa ngokuhlangana nezinye izixazululo zamazinyo zezimonyo, njengama-veneers uma amazinyo ekhubazekile noma egqamile.
Ingabe ukwelashwa okungabonakali kubonakala kubuhlungu?
Ngokungafani nabakaki abajwayelekile, ukungakhululeki okuhambisana nesistimu ye-Invisalign kuncane, ngoba kunengozi encane yokucasuka ezintanjeni.
Ukungakhululeki kukhawulelwe ekuqaleni kwesigaba ngasinye sokwelapha. Iningi leziguli zibika ingcindezi, okuwuphawu lokuthi umuthi uyasebenza. Ingcindezi ngeke ihlale isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezimbalwa ngemuva kokuqondanisa okusha ngakunye.
ingabe kunemikhawulo kulokho engingakudla ngesikhathi sokwelashwa?
Cha. Ngokungafani nezintambo zendabuko nabakaki, ungadla noma yini oyifunayo ngenkathi uselashwa ngoba ususa ama-aligner akho ukuze udle futhi uphuze. Ngakho-ke, asikho isidingo sokunciphisa ukusetshenziswa kwakho kwanoma yikuphi ukudla okuthandayo nokudla okulula. Futhi, kubalulekile ukuthi uxubhe amazinyo akho ngemuva kwesidlo ngasinye nangaphambi kokufaka kabusha ama-aligner akho ukuze kugcinwe inhlanzeko efanele.
Ziyini Izinzuzo Eziyinhloko Zokungabonakali?
I-Invisalign iyindlela enhle yezizathu ezilandelayo:
I-Invisalign ingama-aligners acacile epulasitiki, okwenza ukuthi babe nokuqonda. Lokhu kusho ukuthi ungabhekana nezinguquko eziningi ze-orthodontic ngaphandle kokuthi kube sobala kakhulu.
I-Invisalign inenzuzo yokuba isuswe, okusho ukuthi ungayikhipha lapho udla, uphuza noma uhlanza amazinyo akho, lokhu kusho ukuthi awukhawulelwe ngokwalokho ongakudla ngenkathi usebenzisa i-Invisalign.
Azinazo izintambo zensimbi ezingacasula ingaphakathi lomlomo futhi ngeke kudingeke uchithe isikhathi esiningi kudokotela wamazinyo njengoba ubungenza ngama-brace ajwayelekile.
Uzoba nombono wokuthi amazinyo akho azobukeka kanjani ekugcineni kokwelashwa ngaphambi kokuthi uqale, ngenxa yobuchwepheshe obuthuthukisiwe bokubona amazinyo, obusizayo ekwakheni isikhunta esihlukahlukene.
Ingabe i-Invisalign inomthelela enkulumweni?
Akujwayelekile ukuthi ukwelashwa ngama-orthodontics kushintshe inkulumo kancane, kepha umlomo ulungisa ngokushesha okukhulu. Ungahle ukhulume ne-lisp encane usuku olulodwa noma ezimbili, kepha ulimi lujwayela imikhawulo yalo emisha ngokushesha okukhulu.
yiziphi izinketho ezikhona?
I-Invisalign iyatholakala kubantu abadala nentsha. Mhlawumbe ubufuna ukuqondisa amazinyo akho isikhashana manje, noma ngabe uzokwenza ngcono ukumamatheka kwakho ngenxa yezizathu zebhizinisi nezenhlalo, noma ngisho nomcimbi okhethekile njengosuku lwakho lomshado. Kepha usesigabeni sempilo yakho lapho izinsimbi zensimbi kungesona neze isinqumo ozimisele ukusicabangela. Noma mhlawumbe ungumuntu osemusha noma ungumzali wentsha ofuna isisombululo esisebenzayo kodwa sanamuhla ngaphandle kokuzizwa uzenyeza.
Kunoma ikuphi, i-OptiSmile ingakunika isisombululo esilula kodwa esisebenzayo ukufeza lokhu ngaphandle kokubamba impilo yakho ibanjiwe. Nge-Invisalign noma i-Invisalign Teen uzoba lula nokuvumelana nezimo ukuze uphile impilo yakho ngaphandle kwezinkinga ezihambisana nezinye izinhlobo zokwelashwa. Ama-aligner asobala futhi kunzima ukuwathola lapho egqokile, futhi akwazi ukususwa isikhashana esifushane njengomcimbi obalulekile.
Ukubonisana kwamahhala kwe-inthanethi
Le yindlela esheshayo nelula yokukala ukuthi ukwelashwa kwe-Invisalign kuzolingana nezidingo zakho noma cha.
UDkt.Harris Smeyatsky uqala izinyathelo zokuqala zohambo lwakho lwe-Invisalign njengoba ehlela isethi yakho yokuqala yokuskena kwe-Itero.
Lapho uhlelo lwakho lokwelashwa seludwetshiwe uzobona ukubukeka kwakho kokuqala kwe-3D kokuthi amazinyo akho azohamba kanjani ngesikhathi sokwelashwa.
Sisebenzisa isithwebuli sesimanje se-iTero 3D ukuze sinikeze iziguli zethu imibono yakamuva yedijithali yamazinyo. Kusivumela ukuthi sakhe amamodeli e-3D amazinyo nezinsini anembe kakhulu, anokulungiswa okuphezulu ngamaminithi ambalwa — ukususa isidingo sokuvela kwamazinyo okuvamile.
Ingxenye enhle kakhulu ngesithwebuli se-iTero® 3D ukuthi izokusiza ukuthi ubone amazinyo akho esikhathi esizayo ngaphambi kokuba uqale nokwelashwa kwe-Invisalign®.
Ama-Orthodontics Aligners e-Sea Point, eKapa, ​​eNingizimu Afrika. I-OptiSmile iwumkhuba wokuqala wamazinyo e-Afrika ukusebenzisa isithwebuli se-iTero. Ingabe ubulokhu ufuna amazinyo aqondile kodwa wesaba izinhlungu, ukuphazamiseka kokudla, nokubukeka “kwe-tin grin”?
Ngokungafani nabakaki abavamile, i-Invisalign ivumela ukulungiswa okuqondile ezindaweni ezithile emlonyeni wakho esikhundleni sokufaka ingcindezi kuwo wonke amazinyo akho "abilokhu ehlanganiswe". Emhlabeni jikelele abantu abangaphezu kwezigidi eziyisishiyagalombili babone inzuzo ye-Invisalign ecacile yama-orthodontics ngaphandle kwezinsimbi. Kuyindlela enhle, engeyona eyokuhlasela engathola imiphumela ngokushesha kunama-brace ajwayelekile. Ilungele i- abadala futhi intsha ezingafuni amathrekhi wesitimela wendabuko!
Sizokunikeza incazelo enembile yokwelashwa kanye nezindleko zakho ngokukunikeza isilinganiso esibhaliwe esigcwele ngaphandle kwezimali ezifihliwe.
Uma Ithimba le-OptiSmile seliqinisekisile ukuthi ufanelekile ukuthola ukwelashwa, ekuboniseni kwakho kokuqala okungakhokhiswa, bazohlela ukuvakasha kokuskena ukuze bathathe izithombe, ama-X-ray kanye nezikena zedijithali noma okuvelayo kwamazinyo akho. Lokhu kusivumela ukuthi sakhe icebo lokwelapha le-ClinCheck® 3D elifanelana nezidingo zakho ngazinye.
Izindleko zezinsimbi ezingabonakali ziyehluka njengoba isiguli ngasinye sinezidingo ezihlukile. Ngaphezu kwalokho, uzothola uchungechunge lwama-aligner enziwe ngokwezifiso ozowagqoka. Lezi kufanele zigqokwe nsuku zonke, futhi uzokwazi ukuzishintsha ekhaya, njalo emavikini angu-1 - 2.
Sezadlula izinsuku zokuncibilikisa insimbi nehlazo nokuzinyeza okuza nazo. Ama-aligners e-Invisalign Orthodontics azokusiza ukuthi uzuze ukumamatheka okuhle, ngaphandle kwezintambo ezicwebezelayo ezivela emlonyeni wakho iminyaka emi-2.
Izixhumanisi + Amafomu
Ifomu Elisha Lesiguli
Khokha Isikweletu Ku-inthanethi
Ukubonisana Kwamahhala Kwevidiyo
Linganisa Inkonzo Yethu
Udokotela Wamazinyo Eduze Kwami
I-Invisalign Sula Aligners
Buka Zonke Izinsizakalo
NgoMsombuluko kuya kuLwesine 8AM - 5PM
NgoLwesihlanu 8AM - 4PM
Shayela ku-087 702 6886
I-OptiSmile Advanced Dentistry and Implant Center
I-Suite 303, i-Point Mall Shopping Centre e-Sea Point, 76 Regent Rd, Sea Point, Cape Town, 8005